क्रियाकलापको लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन र घटनाहरूको परिणाम भविष्यवाणी गर्न एक व्यक्तिले सधैं सपना देखेको छ। यो यो इच्छाको आधारमा छ र त्यहाँ सबै प्रकारको सपना पुस्तकहरू र भाग्य-कथाहरू थिए। प्रासंगिक सपनाहरु को तस्वीरहरु मा रहस्यमय अर्थ को खोज आज हराएको छैन। र भविष्यसूचक सपनाहरू अत्यन्तै नै कम हुन्छ भने, हाम्रो अवचेतन दिमागले अविश्वसनीय नियमितता संग सपना-चेतावनी दिन्छ। यस अवस्थामा, मुख्य कुरा महत्त्वपूर्ण र सेकेन्डमा भ्रमित छैन र असुविधाजनक स्थिति मोडेल स्वतन्त्र रूपमा भ्रमित छैन। उदाहरणको लागि, कुनै पनि सपना पुस्तक द्वारा सांप संग एक सपना को छिपे हुए बीड-इच्छाकर्ताहरु संग संघर्ष को रूप मा व्याख्या गरिएको छ। तर कुनै पुस्तकले तपाईंलाई यो शत्रुशाली साथीहरूको पहिचान गर्न कसरी बताउनेछ। तपाईलाई यो गर्नु पर्छ।
त्यहाँ थुप्रै व्याख्याहरू छन्, जुन सपनामा सांप हुन्छ। प्रत्येक सपना पुस्तक एक पटकमा एक पटक को धेरै ट्रांस्क्रिप्टमा जान्छ, कुन अवस्थामा सपना देखाइएको थियो।
उदाहरणका लागि, यदि एक सपनामा तपाईंले मरेको सांप देख्नुभएको छ जुन तपाईले बिर्सनु भयो। सपनाको पुस्तकले यो तस्वीर कसरी प्रकट गर्छ? यस्तो सपना भनेको तपाईंको नजिकको मित्र धोखा र एक कपटी हो, तर चाँडै यो प्रकट हुनेछ।
माथि देखि गिरिएको सांपहरू, अनुयायीहरूको अर्थ हो। तर यदि तपाई सपनामा साँपलाई मार गर्नुहुन्छ भने सफलताको बाटोमा कुनै पनि बन्द नगर्नुहोस्। यो अवस्थाले पनि दुश्मनमाथि छिटो सफलता र विजयलाई पनि प्रतीक बनाउँछ।
यदि साँपले तपाईंलाई सपनामा पुर्याउँछ भने, दुश्मनबाट आक्रमणहरूको आशा गर्दछ। हातमा फोहोर लिन थाल्नुभयो - शत्रु सेनाको विरुद्ध लडाइँ सफलतापूर्वक मुकुट गरिनेछ। तपाईंको शरीरको वरिपरि लम्बाइएको एक बो constrictor, रङ्गहरू माथि - कुनै प्रयासले मद्दत गर्नेछैन, दुश्मनलाई बलियो बनाउनेछ।
गड, तपाईंबाट टाढा, आफ्नो विश्वस्त जीत को प्रतीक बनाउनुहोस्, तर यदि साँप मुर्दा र सपना मा ठोकर, दुश्मनों देखि ठूलो समस्याहरु को प्रतीक्षा।
निस्सन्देह, निद्राको यस्तो व्याख्या जीवन अनुभवमा आधारित छ, जस्तै रूसी नीतिवचनहरू। याद गर्नुहोस् कि ख्याति मित्र यहाँ पनि प्रतिस्थापनको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। अभिव्यक्तिलाई सम्झनुहोस् "छातीमा साँप न्यानो।"
थप रोचक व्याख्या गठित सपना किताब हो। उनको अनुसार, साँपमा साँप ऊर्जा को एक शक्तिशाली प्रवाह को प्रतीक गर्दछ, जसले प्रबंधन गर्न को लागि सीखा जान पर्छ। यदि तपाईं सांपसँग लड्न थाल्नुभयो भने, तपाईंले पहिले नै यो ऊर्जा रोक्न र यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित गर्नुभएको छ।
सपनामा सांप समात्नको लागि एक विश्वसनीय चिन्ह हो, विश्वसनीय सुरक्षा र संरक्षणको अधिग्रहण फर्काउन।
एक सपनामा यो साँप संग सवार बाटो बाटो पार गर्न सम्भव थियो - जीवनमा चिन्ता र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डरहरू आशा गर्दछ।
अक्सर सपने पुस्तकहरु को चीटो को चित्र को अधिक विशिष्ट व्याख्या को लागी नेतृत्व गर्दछ। उदाहरणको लागि, एक महिलाको सपनामा सांप, मतलब दुश्मनीको साजिश, दुष्ट मञ्चहरू वा शक्तिशाली संरक्षक हुन सक्छ।
यदि महिलाले उनको बच्चा खतरनाक छ भनेर हेर्छन् भने, तर उनीहरूले मात्र एक सांप को बारेमा सुन्नुहुन्छ र अवस्था बुझ्न पछि लाग्न सक्दैन, यसको अर्थ त्यो खतरनाक साजिशमा संलग्न हुनेछ।
यदि एक सपना मा महिला एक सांप देख्छ कि उसलाई सम्मोहन संग सम्मोचन गर्दछ, यो एक चेतावनी हो कि सबै दमन उनको लागि पर्खिरहेको छ। तर यस अवस्थामा तपाईं उच्च संरक्षकको सहयोगमा गिन सक्नुहुन्छ।
जस्तै "पूर्वी ड्रीम बुक" हामीलाई आश्वासन दिन्छन्, हरियो सांपले स्वास्थ्यको वास्तविक समस्या वा साँच्चिकै समस्याको अर्थ दिन्छ। यदि तपाईंको निद्रामा रित्तो अप्रत्याशित हुन्छ, उत्कृष्ट रूपरेखाहरू - वास्तविक जीवनमा स्वास्थ्य समस्याहरू अत्यन्तै चाँडो हुनेछन्।
मलाई भन्नुपर्दछ कि यस्तो प्रतीक पनि यसको जरा छ। यो सम्झना गर्नुस् कि एस्लिपपस को उपचार गर्ने भगवान साँप को रूप मा चित्रित गरिएको थियो।
निस्सन्देह, सपनाहरु को व्याख्या को विश्लेषण, यो सिममन्ड फ्रेड को लोकप्रिय सपना बुक को नजरअंदाज गर्न असंभव छ। यदि तपाईं दादा फ्रान्सुडलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, एक सपनामा सांप भनेको पुरुष यौन अंग भन्दा बढि केही होइन। तथापि, श्री सिन्मन्ड फ्रेड एक मात्र एक होइन जसले राइट्स कामुक उपनगरमा देखेको थियो। याद राख्नुहोस्, कम्तीमा, अभिव्यक्ति "एक आँखा आँखाले"।
फ्रुडुडको अनुसार, महिलाको लागि सपनामा सांपबाट भाग्ने यौन सम्बन्धमा समस्या हो। यदि सपनामा साँप साझेदारको स्थान लिन्छ भने, यो एक राम्रो चिन्ह हो, यौन जीवनमा सुखद परिवर्तन फर्काउँछ।
यदि सपनामा तपाईं साँपको पीडा गर्नुभएमा, तपाई सेक्समा धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ।
एक सपनामा सांप चुम्बनको अर्थ मौखिक सेक्सको लागि लुकेको इच्छा हो।
सांपको काटनले आफ्नो साथी वा छेउमा सानो चिसो धोखा दिन्छ।
वैसे, एक मानिस को लागि, साँप संग एक सपना लुप्त समलैंगिक प्रवृत्तियों को मतलब छ।
जस्तो कि तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ, प्रत्येक सपनाको पुस्तकले चीटोको चित्रको व्याख्या दिन्छ। यस्तो प्रकारमा यो बुझ्न गाह्रो छ, त्यसैले यो राम्रो छ कि तपाईंको जीवनमा कंक्रीट घटनाहरूबाट अगाडि बढ्नको लागि।
दुश्मनले कस्तो कुरा गर्छ? सपनाको श्रोताले जवाफ फर्काउँछ
ड्रीम व्याख्या: पूर्व को के हो
किन मरिरहेको पिताले सपना देखाउँछन्? हामी सिक्न सक्छौं!
रोजगारीका साक्षात्कार कसरी एउटा उदाहरण
"मेरो राजा" चलचित्र। आलोचकहरु र दर्शकहरुको समीक्षा
Kataleya नाम: मान, वर्ण, भाग्य